Maqaalkani waxa uu isbarbar shan ciyaaryahan warbaahinta geeyo sare. Just akhri maqaalka si aad u hesho ciyaartoyda ugu fiican ee warbaahinta.
Roku waa ciyaaryahan warbaahinta geeyo in wax fudud si ay u helaan filimada, kulan, music, bandhigyada TV iyo waxyaalaha kale ee ku saabsan TV. Channels Free in boqolaal ay la siiyaa oo ay ku jiraan adeegyada Times sida Hulu Plus iyo Netflix halka bixiya hab sahlan ee gadashada ama ka ijaaraan show ama filim jecel yahay ama jecel la Redbox, VUDU iyo Amazon Instant Video.
Haddii aad tahay macmiilka cable ah, Roku kuu ogolaanayaa inaad si ay u daawadaan ku-baahida filimada iyo asalka jecel adeegyada kala duwan sida History Channel, A & E, Fox Hadda, Watch Disney, Watch ESPN, goor kasta oo Showtime iyo HBO GO.
Isticmaalka ciyaartoyda Roku iman mayso kharashka ku maqan sida lacagta soo noqnoqda.
Ma jiro Times bil kasta user waxaa waafaqsan fursad ay ku bixiso waxa ku jira doorashada.
Ciyaaryahan warbaahinta ayaa isku xira in TV si toos ah ay ka mid yihiin adeegga internet-xawaaraha sare ee isticmaalka bixisaa shabakad guriga la isticmaalo.
Iyada oo ay walkthrough hanuuniyey, tallaabo kasta waa u fududahay in ay raacaan la eber taageero casriga ah loo baahan yahay.
Haddii aad qabto wax ka weyn model TV, Roku ay hubisaa in aad tahay si aad u daawato aad content iyada oo lagu siiyay RCA saarka audio iyo video awoodaan.
Digital TV users ee Roku marayo wax soo saarka HDMI raaxaysan tayo sare leh iyo audio siman iyo video feed.
Roku ayaa buugga a content weyn, laakiin qaar ka mid ah shirkadaha ugu waa bixinta sida kulan nool iyo channels music baahan bixiyo xubin.
Taa waxaa ka duwan, users la video content .avi ka heli doontaa Roku XD / S uusan awoodin inuu ciyaaro.
Users leh ka weyn versions TV isticmaalaya RCA audio iyo video xiriir leeyihiin si ay ula lagdamaan hoos u dhac ku audio iyo video tayo leh, taas oo aan sababta oo ah Roku laakiin technology RCA ka.
Iyada TV Apple aad leedahay fursad ay ku sii qulquli dhammaan noocyada kala duwan ee ka kooban video in Lugood Store midig u gal ah TV-qeexidda sare. Adeegyada waxaa ka mid ah oo ay taageerayaan Netflix, MLB TV, HBO Go, Hulu Plus, Lugood Radio, live TV mahadcelinayaan Disney XD iyo Disney Channel oo lagu daray kumanaan VEVO ee videos music HD.
Iyada oo AirPlay mirroring, waxa aad awoodi kartaa in ay sii qulquli Web video galay aad Apple TV, gaar ahaan kuwa la Mac cusub ee ku saabsan Mountain Libaaxa.
Interface ayaa user ee TV Apple ayaa lagu ammaanay sida mid ka mid ah nooc ka mid ah.
Apple TV laga yaabaa in wax yar ka dambeeya Roku, laakiin waa sanduuqa geeyo ah oo leh waxyaabo aad u fiican, si ka badan haddii aad leedahay qaar ka mid ah saamiga adduunka Apple ah.
Roku 3, ay tartan madax u muuqataa in ay bixiyaan ilo dheeraad ah oo ka kooban sida Instant Amazon, ay ka mid yihiin qaababka kale ee sida fog bilaa Jack headphone ah oo lagu daray ah raadinta cross-madal.
Haddii aadan haysan qalab kale oo ka Apple, Apple TV laga yaabo in aysan sanduuq ah oo streamer fiican ee u gaar ah.
Iyadoo WD TV Live, waxaad leedahay fursad uu ku ciyaaro kaliya oo ku saabsan nooc kasta oo file halkaas. Qaabab File taageeray waxaa ka mid ah VOB / ISO, AVI, MOV, MKV iyo dadka kale ee TV a. Waxaa kaloo jira meelo badan oo aad isticmaali karto si aad qulquli content halka warbaahinta il waxaa ku kaydsan drive shabakadda, qalab USB ama PC wax gudahood shabakad u gaar ah. Waxaa jira in badan oo madadaalo weyn oo ay ku qulquli, sida kun oo filimada tayo leh, trending videos, bandhigyada TV oo music sareeya. Mid ka mid ah wax ka dhigaya WD TV Live si Capital One oo waa xaqiiqda ah in aad beddesho kartaa casriga galay gacanta ku ah kama dambays fog iyada oo loo marayo dalabka WD TV Remote.
WD TV Live hubisaa in aad leedahay soo diyaariyeen badan oo codecs socon, kaydinta weyn oo waafaqsan 3D.
Waxa kale oo aad jeclaan doonaa inta ay le'eg is haysta, si degdeg ah bilowga, video aad u fiican oo tayo leh audio, onscreen menu fududahay in la fahmo oo akhri, oo ay ka mid sahlan si ay u helaan Home Network iyo content Internet ku salaysan oo lagu daray USB keyboard fur-in doorasho ah handiness xogta.
WD TV Live ma laha xarun akhristaha card, user interface ma aha meel u dhow Apple TV iyo ma jiro ee ku-dhisay Wi-Fi.
Waxaa kale oo aan awoodin in uu ciyaaro tiro ka mid ah files COP-ilaaliyo oo aanu lahayn Amazon ah Instant Video helaan.
Tan iyo markii ay gacanta ku app fog yahay Dhawa backlit, ma aha isticmaali karo ee madow ah oo ku wareegsan.
Haddii Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 ee aad leedahay waa nooc cusub ah ama ka weyn, aad leedahay qalab guud u bedelay ka qalab ah oo ugu horayn u ciyaaro, oo ay ku jiraan doorashada ah content online ballaaran, xarunta warbaahinta iyo dhammaan ahaanba featured madadaalada. Microsoft ayaa calaamadeeyey design cusub muraayada ee Madaxweyne Siilaanyo 360 sida mustaqbalka Television sidaas uu cadeeyay in shirkadda socdaan baxsan Console ciyaaraha la Madaxweyne Siilaanyo Oo ah oo ay u ekaysiinaya sanduuqa guri madadaalo leh ciyaaraha sida mid ka mid ah qaababka ay u fiican badan.
The design Xbox360 waa mid aad u gaar ah, halka qalab xasilloon tahay iyadoo Wi-Fi-ku dhisay, taabo badhamada iyo Madaxweyne Siilaanyo Oo Live.
Ma inaad jeceshahay waxaa laga yaabaa la'aanta sanduuq ee cable HDMI ah iyo xaqiiqda ah in cajalladaha ciyaarta ayaa weli burey.
Waxa kale oo ay ka dhigaysaa isticmaalka saxaarad disc ah, ma Blu-ray oo halkaas waa leben awood dibadda.
Shaxda Isbarbar Shan Players Top Streaming Media
Waxaa la dhisay-in Wi-Fi
Play Music ka Computer ah
No Haa Haa Haa No
Play Videos ka Computer ah
No No Haa Haa Haa
> Resource > Video > Isbarbar Players Best Streaming Media